Homeसमाचारछोराले गरे आफ्नै आमाको ह:त्या !
September 14, 2020 admin समाचार 14124
छोराले गरे आफ्नै आमाको ह त्या !
झापाको कमल गाउँपा’लिका–७ मा हिजाे साँझ छोराले आमाको ह त्या गरेका छन् । बाह्रघरे नजिकै मुसह’र बस्तीका स्थानीय २१ वर्षीय छोरा दिनेश ऋषिदेवले बञ्च’रो प्रहा’र गरी ५० वर्षीया आमा मीरा ऋषिदेवको ह त्या गरेका हुन् ।
म’दिरा से’वन गरेर आएका दिनेशले आमासँग वि’वाद भएपछि बञ्च’रो प्र’हार गर्दा आमाको घट’नास्थलमा ज्या न गएको इलाका प्र’हरी कार्यालय दमकका प्रह,री नायव उपरिक्षक विज’यराज पण्डितले बताए ।
नशाको सुरमा दिनेशले आमामाथि अन्धा’धुन्ध हति’यार प्रहार गरेको वडाध्यक्ष पृथ्वीपति राईले जानकारी दिए । ह त्या गर्ने छोरालाई गाँउलेले नियन्त्रणमा लिएर प्रह’रीमा बुझाएका थिए ।
प्रह,रीले अभियुक्तलाई नियन्त्र’णमा लिएर आवश्यक अ’नुसन्धान शुरु गरेको प्रह’री नायव उपरिक्षक पण्डितले बताए । – न्युज २४ नेपाल
April 10, 2021 admin समाचार 6396
October 10, 2020 admin समाचार 11619
May 5, 2021 admin समाचार 5654